Groove: Tapakila fanampiana ho an'ny ekipa mpanohana | Martech Zone
Groove: Tapakila fanampiana ho an'ny ekipa mpanohana
Alarobia, Desambra 23, 2015 Douglas Karr
Raha ekipa mpivarotra miditra ianao, ekipa mpanohana ny mpanjifa, na masoivoho fantatrao haingana aza hoe ahoana no mety hahavery ny fanantenana sy ny fangatahan'ny mpanjifa amin'ny onjan'ny mailaka azon'ny olona tsirairay amin'ny Internet. Tokony hisy fomba tsara kokoa hanangonana, hanomezana ary hanarahana ny fangatahana misokatra rehetra amin'ny orinasanao. Eo no ilana ny lozisialy birao fanampiana ary manampy mba hahazoana antoka fa mifantoka amin'ny valinteny sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa ny ekipanao.
Groove Online Support Ticketing System Features
Fandraisana tapakila ho an'ny ekipa - Manendre tapakila ho an'ny mpikambana ao amin'ny ekipa na vondrona manokana. Manampia naoty tsy miankina izay tsy afaka mahita sy ny ekipanao irery. Mametraha fanontaniana, manome sosokevitra, na avereno jerena ireo mpikambana ao amin'ny ekipa vaovao alohan'ny handefasana azy. Jereo tsara izay mitranga ao amin'ny Groove amin'ny fotoana tena izy. Ho fantatrao rehefa omena, vita, sokafana na naverina naoty ny tapakila.
Mombamomba ny mpanjifa amin'ny antsipiriany - Tsy mila fihazana tapakila taloha intsony raha hijery izay lazain'ny mpanjifa. Midira amin'ny tantaram-panohanana rehetra an'ny mpanjifa amin'ny tsindry tokana.
Fitaovana famokarana - Tehirizo ny valiny amin'ny fanontaniana mahazatra, ary ampidiro amin'ny tsindry misy hafatra izany. Mamorona marika manokana handaminana tapakila na hametahana azy ireo ho an'ny referansy ho avy amin'ny fampiasana izay rafitra mety indrindra aminao. Mampiasà fitsipika hamerenana ny fomba itantanana ny tapakila. Ohatra, manendre tapakila iray ho an'ny mpikambana ao amin'ny ekipa mifototra amin'ny hoe avy aiza izy ireo, na hafatra sainam-pirenena izay ahitana ilay teny maika.
karazana verinia - Ny rafitry ny tapakilan'ny olana ao Groove dia toa sy mahatsapa tena toy ny mailaka amin'ny mpanjifanao. Tsy mila mandalo rafitra fidirana hafa mihitsy ny mpanjifanao na manondro laharana tapakila hahazoana fanampiana.
Social Media - Jereo sy valio ireo sioka na rindrina ao amin'ny rindrin'ny Facebook izay manonona ny marikao, ary mamadika mora foana ireo lahatsoratra ara-tsosialy ho tapakila mpanohana.
Araho ny fanohanan'ny telefaona - Midira an-tsipiriany momba ny resaka an-telefaona izay azo tehirizina ho tapakila, mba hiseho amin'ny tantaran'ny mpanjifanao izy ireo ary azonao atao ny manondro azy ireo amin'ny fotoana rehetra.
Fanomezana fahafaham-po - Avelao ny mpanjifanao hanisa ny valinteninao ary hanome anao hevitra.
Knowledge Base - Ampio ireo mpanjifanao an-tserasera hanampy ny tenany amin'ny base fahalalana.
Fampidirana tapakila Groove Support
Widget - Ny widget fanampiana an'i Groove dia manome antoka fa fantatry ny mpanjifa foana ny fomba ifandraisana, ary azo ampanjifaina izy io mba hahatsapana ho toy ny ampahany tsy mitongilana amin'ny tranokalanao.
API - Ampiasao ny API hisintona ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa avy amin'ny CMS ao anaty anao, ny fampiharana faktiora, na rindrambaiko antoko 3 hafa, ary zahao izany ao amin'ny mombamomba ny mpanjifanao akaikin'ny tapakila rehetra
Live Chat - Dingana roa fidirana SnapEngage na Olark fifampiresahana mivantana hitazomana ny chat ao amin'ny Groove ary hanohanana ny mpanjifanao amin'ny fotoana tena izy.
CRM - Ampifandraiso amin'ny Groove mankany Highrise, Batchbook, Nimble, Zoho na Capsule ary mahazoa fidirana mora amin'ny fampahalalana momba ny mpanjifa lalindalina avy amin'ny CRM anao, azo zahana eo akaikin'ny tapakila tsirairay. Raha tsy ampy izany dia manome fampidirana amin'ny Zapier izy ireo.
karazana verinia - MailChimp, Monitor Campaign ary fampifandraisana tsy tapaka.
hiahotrahoranareo - fampidirana mivantana amin'ny sehatra fifandraisan'ny ekipanao.
Groove dia rafitra mandoa vola araka izay andanianao mampiditra sy manaisotra ny mpanjifa amin'ny kaontinao, mandoa $ 15 isaky ny mpampiasa isam-bolana.
Atombohy ny fitsarana anao mandritra ny 30 andro
Tags: Widget APIBatchbookCampaign MonitorCapsulefoana ContactgroobeGrooveWidgetan'ny birao fanampianahelpdeskHighrisemailchimpNimbleOlarkSnapEngagefanohananaekipa fanohananawidget manohanaekipaFanomezana tapakilazapierZoho
Douglas Karr Wednesday, December 23, 2015
Soso-kevitra feno momba ny fampitomboana ny ROI dokam-barotra isaky ny tsindry
Ny mari-pamantarana lehibe an'ny Analytics amin'ny fidirana anaty varotra
5 Jan 2017 amin'ny 11:54 PM
Hi Douglas Karr,
Misaotra tamin'ny fizarana fampahalalana tsara momba ny rafitra Helpdesk Ticketing, ny fomba mahasoa azy amin'ny fanohanana ekipa ..